पहीलो पटक समुन्द्र लाइ देख्दा - Ddus Gajurel Blogs
पहीलो पटक समुन्द्र लाइ देख्दा
यो जिन्दगी यस्तै रहीछ , कहीले कता कहीले कता । दुःख मा पनि हास्नु पर्ने , सुखमा पनि रूनु पर्ने । भनिन्छ दुःख सुख भएन भने जिन्दगीको मजा नै हराउछ । यस्तै प्रकारले जिन्दगीको बाँटोमा हिड्दा हिड्दै जिवनमा पहीलो पटक समुन्द्र देख्ने अवसर मिल्यो । मन त्यसै गदगद थियो । सुन्दै मन रमाइ रहेको थियो । समुन्द्रको तिरमा नयाँ बर्ष मनाउने ।
30 Dec 2009 बिहान ८ बजे हामी पुणा(Pune) बाट निस्कियै । ६ जाना ३ वटा बाइकमा निस्कियै । जिन्दगीको माजा लिन । बाटोमा पर्ने प्रकृतिसंग खेल्दै रम्दै हामी निस्कियै । सकुन्द्र सतह बाट 77.6 ft , (18*09’43.58” N, 72*59’36”E) मा रहेको दिवाअगर भन्ने ठाँउमा घुम्न गइएको थियो । हामी बसेको ठाँउबाट करीवन १८० किलोमिटर को दुरीमा रहेको सानो गाँउ हो दिवाअगर । Maharashtra State India मा रहेको यो गाउँ प्रर्यटकहरूले भरीभराउ हुदो रहीछ ।
सरीर सुकेको भए पनि यो समय मा नाँक निकै ठुलो भएको थियो
नुनिलो पानिमा रमाउदै
सबै कुरा भुलोको थिए यो समय मा
यहाँ छन अन्य फोटोहरू
बेदनाथ पुलामी ( उमेश ) January 20, 2010 at 3:57 AM
उमेश जी ! यी तस्विरहरु त तपाइले फेस बुक मा पहीला पनि शेर गर्नु भएको थियो नि , राम्रो ठाउ रहेछ - दिवाअगर |
Ashesh January 23, 2010 at 4:29 PM
लु म पनि भारत आउँछु । घुम्न लाग्यो साह्रै । लोभ्याईदिनु भो नि तपाईँले त....कहिले आऊँ म????
Dilip Acharya January 24, 2010 at 4:01 PM
तस्विरहरुले मलाई पनि रोमाञ्चित गरायो ! ।
विवेक January 29, 2010 at 12:24 AM